Advocacy mora: fitaovana fanentanana maimaimpoana ho an'ny haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Ny tantara izay tsy nandao ahy mihitsy dia ilay namana Mark Schaefer nozaraina taona maro lasa izay rehefa niresaka tamin'ny fihaonambe. Nifanakalo hevitra momba ny marika iraisam-pirenena iray izay misy mpiasa ana hetsiny izy. Ny ekipan'izy ireo media sosialy dia namokatra onjam-peony tambajotra sosialy tsy misy farany… izay saika tsy nisy olona namaly na nizara. Nanontany i Mark hoe inona no karazana fahatsapana nananan'io orinasa io rehefa tsy nirotsaka ny mpiasan'ny marika na nizara ny atiny novokarin'ny orinasa?
Mazava ho azy, misy ny mpiasa sasany izay mitazona ny fiainany manokana tsy hitokana amin'ny mombamomba azy ireo. Na izany aza, misy foana ny fanangonana mpiasa izay ekena amin'ny sehatry ny orinasan'izy ireo, atokisan'ny mpanjifanao sy ny namanao azy, ary iza no afaka manako sy manamafy ny tratry ny varotra ataon'ny orinasanao. Maninona ianao no tsy mampiasa azy ireo?
Misy ihany koa ny influencer ao anatin'ny tambajotra mpiara-miasa aminao sy ny mpanjifanao afaka mizara ny varotra media sosialinao. Miditra amin'ireo olona ireo koa ve ianao?
Advocacy mora: Sehatra maimaim-poana avy any Agorapulse
Izaho dia mpankafy ela ny orinasa ary fitaovana avy Agorapulse. Ny sehatra fidirana an-tsosialy ataon'izy ireo, araka ny hevitro, no tsara indrindra eny an-tsena. Nanomboka ny famatsiam-bola avy amin'ny tenany ny orinasa, mamaly tsara ny endri-javatra, mahomby ary manome interface tsara izay ahafahan'ny masoivoho sy ny orinasa manara-maso, mandrefy, mamoaka ary mamaly ny fantsona media sosialy rehetra avy amina mpampiasa iray. Agorapulse koa dia mpanjifako… ary manohy mpiara-miasa amin'izy ireo aho.
Tsapan'i Agorapulse fa misy ny fotoana lehibe ahafahan'ny mpiasa sy ny mpisolovava mpiaro ny fampielezana ny hafany manokana, ka namorona izy ireo Advocacy Mora, sehatra fanentanana amin'ny haino aman-jery sosialy maimaim-poana.
Endri-javatra momba ny Advocacy Mora
Fametrahana fanentanana haingana - Manaova fampielezan-kevitra amin'ny alàlan'ny fanentanana amin'ny fomba feno ao anatin'ny 10 minitra. Ampidiro ny mailaka ao amin'ny lisitry ny fizarana, alao ny URL izay tianao zaraina ary ampio famaritana, ary kitiho ny mandefa!
Ataovy mora ny mizara ny atiny - Ho hitan'ny mpiasanao izay rehetra ilainy hizarana amin'ny toerana iray. Ny hafatrao dia azo zaraina amin'ny Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest na amin'ny alàlan'ny mailaka.
Fantaro hoe hatraiza no nahatratrarana ny atiny - Jereo avy hatrany hoe iza ny fampielezan-kevitra miasa ary mahazo ny fipihana sy mpitsidika betsaka indrindra. Jereo hoe iza ao amin'ny lisitry ny fizarana no tena liana indrindra ary manome ny fomba fijery betsaka indrindra! Ny fananana takelaka hita maso dia mandrisika ireo mpiasa hanatsara ny valiny.
Manampia fanentanana fanentanana
Topazo maso ny fanentanana momba ny fanentanana
Tsinjarao ny fanentanana nataonao
Jereo ny valin'ny fanentanana nataonao
Tsy fitaovana maimaimpoana hafa fotsiny nariana teny an-tsena io, ny ekipa ao amin'ny Agorapulse dia mampiasa ilay fitaovana hizarana ny lahatsoratr'izy ireo sy ny fampiroboroboana azy ireo amin'ireo mpiasan'izy ireo manokana sy ny tambajotran-dry zareo mitaona… anisan'izany aho! Amin'ny maha mpisolovava ny asan'izy ireo dia azoko antoka fa nanamora ny fiainako izany satria ny hafatra sy ny rohy rehetra dia efa voasoratra mialoha sy voalamina. Azoko atao ny manamboatra tweaks madinidinika mba hizaha toetra ilay hafatra - ary hizara izany ao anatin'ny segondra.
Mandrosoa ny fanentanana voalohany ataonao
Tags: fanentanana morasehatra fanentanana maimaimpoanampisolovava amin'ny influencerhizara media sosialyfanentanana amin'ny media sosialyfizarana media sosialy